Egwurugwu ultraviolet | Network Meteorology
Abọchị ole na ole oge okpomọkụ ebiliwo ma akụkụ nke peninshula ahụ na-ata ahụhụ n'oge ọkọchị karịa mmiri. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ichebe onwe gị pụọ na anyanwụ wee zere nsogbu akpụkpọ anụ n'ọdịnihu.
Ultraviolet rays bụ ihe kpatara nsogbu ndị a ya mere ọ dị mkpa ịmata ihe ha mejupụtara na ihe bụ aro iji chebe akpụkpọ si omume nke ndị a ụzarị.
Ultraviolet ụzarị ma ọ bụ UV bụ ụdị ike anwụ na-agba n’isi ya wee banye n’elu ụwa. E nwere ụdị radieshon abụọ dị: UV-A na UV-B. Typedị ụdị radieshon mbụ nwere ike banye n'ime n'ime anụ ahụ ma dịkwa oke egwu. dịka ọ nwere ike ibute ọrịa cancer anụ ahụ na-atụ ụjọ.
N'ihe banyere UV-B, ha anaghị abanye n'ime ya bụ ụzarị ọkụ na-akpata ịcha ọbara ọbara na mmebi ahụ anụ ahụ, na-eme ka ọkụ ndị a ma ama nke anyanwụ na-ewe. O gosiputara ya na sayensi na ekpughere akpukpo aru ya n’ile nke anwu bu isi ihe n’enwe oria akpukpo aru. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa izere oge ọ bụla na ụzarị ọkụ UV na-abanye n'ime akpụkpọ ahụ na kpata nnukwu mbibi.
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị cheta na ị kwesịrị izere ịnwụ anwụ na etiti etiti ụbọchị na chebe akpụkpọ ahụ na ude a kapịrị ọnụ nke na-enyere gị aka ilekọta ya nke ọma. Ugbu a ihu igwe dị mma dị ebe a ma ọtụtụ mmadụ na-enuga n'ụsọ osimiri na ọdọ mmiri iji nwee oge dị mma ma nwee ihu igwe dị mma, ọ dị mkpa iji lekọta ụzarị ọkụ UV dị egwu. Cheta ichebe onwe gị n'ụzọ zuru oke ma si otú a zere nsogbu akpụkpọ n'ọdịnihu nke nwere ike ịghọ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe ma dị oke njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Kedu ihe bụ ụzarị ultraviolet
Ifufe Levante na Poniente